छापामा शिक्षा : रिटोटलिङ पनि गोलमाल | EduKhabar
छापामा शिक्षा : रिटोटलिङ पनि गोलमाल
काठमाडौं १५ असोज / काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले डाक्टर बन्ने सपना बोकेका हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ । नयाँ पत्रिकामा केयूको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा हेरफेर प्रकरण : रिटोटलिङ पनि गोलमाल पुनः परीक्षाको माग शिर्षकमा छापिएको खबर अनुसार एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षामा चरम लापरबाही भएपछि विद्यार्थीको मागअनुसार रिटोटलिङ गरिएको थियो । तर, रिटोटलिङको नतिजा पनि गोलमाल छ ।
प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रमाण भेटिँदा पनि केयूका पदाधिकारी छानबिन गर्नुको सट्टा मौन बसेका छन्, विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । तर, गम्भीर समस्या समाधानको पहल गर्नुको सट्टा उपकुलपति प्रा.डा. रामकण्ठ मकाजू बिदेसिएका छन् भने रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन् । विद्यार्थीले पुनः प्रवेश परीक्षाको माग गरेका छन् । प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा २८८ विद्यार्थीको नतिजा हेरफेर भएको थियो ।
एमबिबिएस÷बिडिएसको प्रवेश परीक्षामा आठ हजार दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी थिए । छात्रवृत्तिसहितका लागि लिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा ४ असोजमा सार्वजनिक भएको थियो । तर, नौ सय ८६ विद्यार्थीले चित्त नबुझाएर रिटोटलिङ गरेपछि गत शुक्रबार पुनः दोस्रोपटक नतिजा सार्वजनिक भएको थियो ।
पहिलो सूचीमा उच्च अंकसहित पास भएका विद्यार्थी दोस्रोमा फेल भएका छन् भने पहिले फेल भएका उच्च अंकसहित दोस्रो नतिजामा पास भएका छन् । पहिलो सूचीमा नरहेका ५९ नाम दोस्रो सूचीमा भित्रिएका छन् । त्यस्तै, पहिलो सूचीमा नाम भएका ५८ जना दोस्रो सूचीमा छैनन् । नयाँ सूचीमा रिटोटलिङको निवेदन नदिएकाहरू पनि थपिएर आएका छन् । अंक र मेरिट लिस्टमा तलमाथि हुनेको संख्या धेरै छ । एउटा विद्यार्थीको नाम र सिम्बोल नम्बरमा अरूको नाम र सिम्बोल नम्बर गाभिएर आएको छ । सिम्बोल नम्बर २७८७४ की शिवानीकुमारी शाहको पहिलो सूचीमा ८२ अंकसहित १३३ नम्बरमा नाम निस्केको थियो । तर, दोस्रो नतिजामा उनी फेल भएर सो स्थान सिम्बोल नम्बर २७८७५ की संस्कृति चापागाईंले पाएकी छिन् । पहिलेको सूचीमा संस्कृतिको अंक ७० र मेरिट नम्बर १३३२ थियो । सुरुको सूचीमा नामै नभएका एमडी नसिर दोस्रो लिस्टमा ७४ अंकसहित ७७३ नम्बरमा आएका छन् । विद्यार्थी थपिँदा पनि पहिलो लिस्टमा ¥यांक थपिएको छैन । १३३ भन्दा माथिको पहिलो र पछिल्लो सूची एउटै छ । विद्यार्थीका अनुसार केयू प्रशासन एकदेखि सयसम्मको मेरिट लिस्ट अब परिवर्तन नगर्ने अडानमा छ । समग्रमा पहिलो नतिजामा चार हजार ६ सय ४८ जना पास हुँदा दोस्रो नतिजामा संख्या घटेर चार हजार चार सय ८९ पास भएका छन् ।
त्यस्तै, केयूले लिएको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाबाट नियमविपरीत प्रश्नपत्रसमेत बाहिरिएको छ । परीक्षासम्बन्धी नियममा कुनै पनि प्रश्नपत्र विद्यार्थीले बाहिर लैजान नपाउने व्यवस्था छ । तर, विद्यार्थीमार्फत नै प्रश्नपत्र बाहिरिएका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयप्रति केयूका पदाधिकारी भने बेवास्ता गर्दै छन् । परीक्षाअघि वा परीक्षा चलिरहेको अवस्थामा वा पछि बाहिरिएको भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
रिटोटलिङबाट समेत चित्त नबुझाएका विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी नेतृत्वले पुनः परीक्षाको माग गरेका छन् । एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको पहिलो सूचीमा फेल भएका, तर दोस्रो सूचीमा ७४ अंकसहित ७७३ नम्बरमा आएका मोहम्मद नसिरले केयूको प्रवेश परीक्षामा चरम लापरबाही भएकाले पुनः परीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘मेरो ८५ भन्दा बढी अंक आउनुपथ्र्यो, तर पहिले फेल गराए, अहिले ७४ नम्बर आएको छ । यसमा मलाई कुनै विश्वास छैन, अब पुनः परीक्षा नै समाधानको बाटो हो,’ उनले भने । पैसाको चलखेलमा नतिजा अविश्वसनीय आएको उनको आरोप छ । प्रश्नपत्रसमेत बाहिरिएको र कसैले डिभाइस पनि प्रयोग गरेको सुनिएकाले पुनः परीक्षा गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
अर्का विद्यार्थी दिलीपकुमार साहले तीन वर्षदेखि दसैँमा घरसमेत नगई काठमाडौं बसेर तयारी गरेको सुनाउँदै केयूको लापरबाहीबाट अन्यायमा परेको गुनासो गरे । सबै प्रश्न आफूले जानेकै आएको, तर अंक ६८ मात्रै आएकोमा शंका लागेको उनको भनाइ छ । आफ्नो ८८ अंक आउनुपर्ने उनको दाबी छ । ‘परीक्षामा निकै चलखेल भएको छ, विद्यार्थीको न्यायका लागि अब पुनः परीक्षा हुनुपर्छ,’ साहले भने । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीले केयूबाट भएको लापरबाहीको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका प्रवक्ता तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय मेडिकल स्टुडेन्ट वेलफेयर काउन्सिलका अध्यक्ष सुजन कडरियाले विद्यार्थीमाथि भएको गम्भीर खेलबाडबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल भन्छन्–केयूले छानबिन नगरे आयोगले निर्णय लिन्छ
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. अभिशेक सिंह भन्छन्–पदाधिकारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ
प्रकाशित मिति २०७६ असोज १५ ,बुधबार